AmaProteas abekela i-England umphumela omkhulu
Hashim Amla of South Africa hits out during the third day of the 2nd Investec Test match between England and South Africa at Trent Bridge cricket ground on July 16, 2017 in Nottingham, England. (Photo by Philip Brown/Getty Images)
AmaStandard Bank Proteas anqobe kokubili akade bekufuna ekuhleleleni i-England umjaho we-innings yesine odlule kakhulu kulokhu okade kunqotshiwe futhi bacikelela phansi i-pitch ngosuku lwesithathu lomdlalo wesibili we-Test eTrent Bridge eNottingham ngeSonto.
Ngesikhathi u-Faf ethatha i-declaration, ushiye abaphosayo nama-overs amane ukuthi bahlasele abashayayo kwi-England abakhathele ngaphambi kokuthi luphele usuku, iqembu lasekhaya kumele lifike ku-474 kuma-overs acishe abe u-184 ukuze banqobe.
u-Alastair Cook usindile kwi-review ngebhola lokuqala le-innings yesibili ye-England eliphoswe u-Morne Morkel. Ebekhishwe u-umpire u-Paul Reiffel nge-lbw kodwa i-review itshengise ukuthi ibhola lidlule ama-stumps.
Ebembalwa amabhola athuse i-England ukuze isinde ngaphambi kokuthi baqede usuku beno-1/0.
Kulokhu okubili amaProteas azihlelele kona, ekuhlaleni kwi-crease isikhathi eside osukwini yikhona obekubalulekile. Ngokuhamba kosuku, amabhola ebephansi phezulu, u-Du Plessis waphuma nge-lbw ekhishwa ibhola eliphume ku-Ben Stokes elimushaye iqakala.
Uma ucabanga ukuthi i-England inabadlali abahlanu abashaya ngesandla sokunxele kubadlali babo abashaya phezulu abayisikhombisa, abathandanga ukubona umdlali wabo ophosa i-left-arm spin, uLiam Dawson, ethola i-turn ne-bounce ku-Morkel ngebhola aliphose ngalapha okungekuhle ngakhona ngaphandle kwe-leg stump ye-left hander.
Manje amaProteas anezinsuku ezintathu ezigcwele ukuqeda umsebenzi futhi athole ukulinganisa i-series ngokunqoba, kungaba yilokho abakufanele. Bebehamba phambili ezinsukwini ezintathu zokuqala.
Kube i-Test yokuqala e-England enhle ku-Du Plessis owayeyilunga leqembu lokugcina elafika lapha ngo-2012 kodwa akadlalanga. Kusukela ngesikhathi enqoba i-toss futhi ngaphambi kwalokho ngesikhathi kukhethwa wathola yonke yinto ngendlela futhi indima yakhe kube u-63 namhlanje (128 balls, 9 fours) njengoba eqedele isikhonkwana akade sibekwe u-Dean Elgar (80 off 136 balls, 12 fours) no-Hashim Amla (87 off 180 balls, 14 fours and 1 six).
i-second wicket partnership phakathi kwa-Elgar no-Amla yama-runs angu-133 kube enkulu emdlalweni kuze kube yimanje, enye yezinombolo ezintathu u-113 kube eka-Amla no-Quinton de Kock kwi-innings yokuqala.
uVernon Philander unezezele ngo-42 (75 balls, 3 fours, 2 sixes) ngaphambi kokuthi aphume nge-declaration ezama ukuthola u-six wesithathu ulandelana kuphosa u-Moeen Ali. Okwamanje uPhilander une-batting average engu-55.66 futhi usewenze owakhe u-No. 7 khona maduze.
u-Moeen uphose kahle kwi-England wathola u-4/78 nokho umklomelo wabo kube oka-Stokes no-Jimmy Anderson abathole ama-wicket amabili umuntu emunye.
uMorris uphendula isicelo sakapteni Uthi uDu Plessis amaProteas ‘azovivinywa isimilo’ uMoeen Ali uthatha abayisithupha ukunqobisa i-England Die Standard Bank Proteas bly optimisties dat hulle steeds kan terugveg in die eerste Toets teen Engeland op Lord's. Engeland is stewig in die saal met 'n voorsprong van 216 met nege paaltjies staande na drie dae se spel. Azikho izizaba zama-no-balls - uPhilander uRoot ubungaza usuku lakhe lokuqala njengokapteni ngokuthola ikhulu ukubeka i-England ngaphambili uPhilander ubuyela kwinkundla eyamulethela ukujabula uElgar onesibindi indoda yomsebenzi – uDomingo uDu Plessis uzophuthelwa iTest yokuqala ngenxa yomndeni I-Series iqala kusasa - uElgar Ukubekezela kumsebenzelile uKuhn